रवी लामिछाने पक्राउपछि मलाई गोलि ठोक भन्दै छाती थापेर रुँदै चौकी पुगिन्आमा (भिडियो) – Naya Pusta
✍️ नयाँ पुस्ता प्रकाशित मिति : २०७६ भाद्र १, आईतवार २०:४१ [post-views]
काठमाडौँ । रबि लामिछानेलाई समर्थन गर्दै एक आमा प्रहरी चौकीमा मलाई गोलि ठोक भन्दै आइन तर उनलाई प्रहरीले लखेटेको छ । रबि लामिछाने पक्राउ परेपछि देशमा सबै जनता निराश भएर सडकमा आएका छन । जताततै अहिले देशमा सबै जनता जागेका छन सबैले रबिलाइ निर्दोष भन्दै नारा लगाउदै छन।
अन्ततः अब देशमा के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर जनता छटपटाइरहेका छन । सालिकराम पुडासैनी चितवनमा मृत फेला परेपछी रबि लामिछाने एकाएक विवादमा तानिएपछी सबैजना जनता आक्रोशित बन्दै आएका छन । रबि लामिछानेलाई अहिले प्रहरीले अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा राखिएको छ ।
अब देशमा के होला देशले कुन मोड लिएला अनि रबि लामिछानेलाई दोषी साबित गरेर फसाउलान अथवा रबिले गल्ती गरेकै हुन त भनेर अन्योलको अवस्था छ देशमा । चितवनको यतिधेरै गर्मीमा घामपानी नभनी सडकमा पुगेका छन जनता ।
छाती थापेर गोलि ठोक भन्दै चौकी पुगेकी आमा शान्तिपुर्ण ढंगले रबि लामिछानेको पक्षमा बाटोमा सुतेर आफू भोकै बस्न तयार रहेको बताइन तर प्रहरीले उनलाई यस्तोसम्म गर्यो तल भिडियोमा हेर्नुहोला :
हातमा यस्तो चिन्ह भएका व्यक्ति हुन्छन् निकै भाग्यमानी, तपाईको हत्केला कस्तो ?
जाडोबाट कसरी बच्ने ? के रक्सि खाएर जाडो हट्छ त ?
प्रेमिकाको सुन्दरता बयान गर्दै सतिश, ‘कोमल माया’ बजारमा (भिडियो)
भ्वाइस अफ नेपालबाट बाहिरिइन् झुप्री भण्डारी, हेर्नुहोस् अन्तरवार्ता (भिडियो)